★မြန်မာ့အလင်း★: မြန်မာတွေ… တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ရန်ဖြစ်နေမှာလား?
လောကဆိုတာ ယှဉ်ပြိုင်မှု၊ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ အမြဲကြုံတွေ့နေရတာပဲ။ ခင်ဗျားတို့က မယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင် ရှုံးမှာပဲ။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ကရင်၊ ရှမ်။ ရခိုင်၊ ဗမာ ၊ နအဖ၊ ဒီမို ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တွေနဲ့ ရန်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကုလားတွေက စည်းလုံးနေပါပြီ။ တိုင်းရင်းသားတွေ တစ်ခုချင်းကြည့်ရင် လူဦးရေ ၂ သန်း ၀န်းကျင်ပဲ ရှိပါတယ်။ ရခိုင် ၂ သန်းက ကုလားကို ယှဉ်လို့ရမယ် မထင်ပါနဲ့။ ဗမာ ၁၀ သန်းက လဲ ကုလားကို ယှဉ်လို့ရမယ် မထင်ပါနဲ့၊ ရှမ်း ၃ သန်းကလဲ ဘာမှ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သန်းတစ်ထောင်ရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေကို အညံ့ခံမှာလား? မြန်မာအချင်းချင်းပဲ သတ္တိုရှိတဲ့ အခြောက်တွေလို ဆက်လုပ်နေမှာလား? စဉ်းစားပေါ့ဗျာ
ရခိုင်ပြည်၊ ကျောက်တော်မြို့က ကုလားတွေက သူတို့အချင်းချင်းကူညီနေပါတယ်
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 3:46 AM